Magweta eInternational Immigration muNetherlands - Law & More
Mutemo wekupotera unobata zvinhu zvine chekuita nekubvumidzwa, pekugara uye kudzingwa kwevatorwa. Vatorwa vedzimwe nyika vanhu vasiri vechiDutch. Vanhu ava vanogona kuve vapoteri, asiwo nhengo dzemhuri dzevanhu dzinogara muNetherlands. Ivo vangave zvakare vanhu vanoda kuuya kuzoshanda muNetherlands.
INODAI YEMUFANANIDZO MLAYYER?
GADZIRA PENYAYA LAW & MORE
> Kunyorera tsamba yekugara
> Kunyorerera kwechiDutch nyika
> Kubatanidzwazve kwemhuri
> Kutama kwevashandi
> Ane hunyanzvi hwakanyanya kutama
Magweta edu evanobva kune dzimwe nyika achafara kukubatsira kana iwe uchida kuendesa mvumo yekugara kana kuti Naturalization chikumbiro chako iwe, mumwe wako, nhengo yemhuri kana mushandi. Law & More inogona kukupa zano kana kukukwanisira kunyorera mapepa ekuitisa mvumo yekugara. Kana chikumbiro chako chakarambwa, tinokwanisa zvakare kukubatsira kuendesa chinopikisa kuchisarudzo cheDutch Immigration and Naturalization Service (IND). Iwe une mubvunzo kune mumwe wevamiriri vedu vekubuda? Kana zvirizvo, isu zvirokwazvo tichafara kukubatsira.
Mienzaniso yezvidzidzo zvatingakubatsira iwe ndeiyi:
• Residence mvumo;
• Kubatanidzwa kwemhuri;
• Kutama kwevashandi;
• Vakawanda vane hunyanzvi hwekufamba.
Nei kusarudza Law & More?
Zviri nyore kuwanikwa
Law & More inowanikwa Muvhuro kusvika Chishanu
kubva 08:00 kusvika 22:00 uye pakupera kwevhiki kubva 09:00 kusvika 17:00
Kukurukurirana kwakanaka uye nekukurumidza
Magweta edu terera nyaya yako uuye
nechirongwa chakakodzera chekuita
Yedu yekushandisa nzira inoona kuti 100% yevatengi vedu vanotikurudzira uye kuti isu takapihwa paavhareji ne9.4
musangano, chirongwa chakajeka
Kunyorera tsamba yekugara
Mvumo dzekugara nguva dzose dzinosanganisira mvumo yese yekugara kunze kwekubvumidza kwekugara mvumo. Iyo IND inoshandisa mutemo unoregedza wekubvuma. Chikumbiro chemvumo yekugara chinongorambwa ne IND kana mamiriro ezvinhu akasasangana. Magweta edu ekunze ane ruzivo mukunyorera mhando dzakasiyana dzemvumo yekugara. Tinogona kuendesa mafomu kune inotevera mvumo yekugara:
• Residence mvumo yekubatanidzwazve kwemhuri;
• Yekuzvishandira mvumo yekugara;
• Residence mvumo EU mugari;
• Kugara mvumo yeane hunyanzvi hwekufamba;
• Residence yemvumo yekudzidza / yekutsvaga gore;
• Kugara nguva yemvumo;
• Pemiti yekutenderwa pekugara;
• Mvumo yekugara kwenguva pfupi (MVV).
Magweta edu ezvekuhamira akagadzirira iwe
Ungade kugara kuNetherlands?
Iwe hausi nemhuri yako here kana kuti mhuri yako haizi newe? Ziva zvatingakuitira
Iwe unoda kushanda uye kugara muNetherlands? Tinogona kuronga iyo yose yekuita maitiro
Ane hunyanzvi hwakanyanya kutama
Iwe unoda here kuti mushandi wokune dzimwe nyika ashande zviri pamutemo muNetherlands? Sangana
Kunyorerera kwechiDutch nyika
Kana uchida kunyorera nyika yeDutch, chikumbiro chekuzvimirira chinofanira kutumirwa. Izvo zvinowanzoomerwa kuzvitonga pachako kuti unokodzera kuzvisarudzira. Kubatsira kwegweta rakanaka rekubuda kwakanaka kwakakosha, nekuti mamiriro ezvinhu kazhinji akaomarara. Kuchenjerera mune yakasarudzika application maitiro kwakakosha kuti ubudirire application. Iwe unoda rubatsiro nekunyorera nyika yeDutch? Law & More inokupa iwe chakakodzera rubatsiro uye inotsigira iwe panguva yose maitiro. .
Mamiriro akasimba anoshandawo mukubatanidzwa kwemhuri. Kana chimiro chisina kuzadzikiswa, iko kukumbira kucharambwa. Nhengo dzemhuri dzinotevera dzakakodzera kubatanidzwa mumhuri.
• waakanyoresa naye;
• mukwanyina asina kuroora;
• vana vadiki.
Imwe yemamiriro ezvinhu ekubatana kwemhuri ndeyekuti iye anonyorera uye nhengo yemhuri vese vari vaviri vanogona kunge vaine makore makumi maviri nemasere. Kuwedzera kune vakaroorana, vakanyoresa vakaroorana, vakaroora vasina kuroora uye vana vadiki, vakafanana pabonde (vasina kuroora) vakaroorana vanogona kuve vanokodzera kubatanidzwazve kwemhuri.
Ungave iwe unoda kuuya kuNetherlands kuzoshanda pano semutambi ane hunyanzvi, munhu anozvishandira kana kugara pano kwenguva pfupi yenguva nebhizimusi vhiza? Magweta edu ekuona nezvekuhamende anopa zano kune vese vashandi pamwe nevashandirwi nezvezvingaitika uye anovatungamira kuburikidza nechirongwa chekushandisa.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekubvumira mushandi wekunze kugara uye kushanda zviri pamutemo muNetherlands kunyorera mvumo yekugara semunhu ane hunyanzvi hwekufamba. Mune izvozvo, mvumo yebasa haidiwi. Mamiriro acho, zvakadaro, ndeekuti mushandirwi akanyoreswa muNetherlands semubvumiri anotsigirwa neiyo IND. Uye zvakare, zvakakosha kuti munhu ane hunyanzvi kwazvo wekufambisa asangana neimwe mari inodiwa. Chikwata chedu chemagweta evatorwa chinogona kukubatsira uye tinokwanisa kuendesa chikumbiro pachako panzvimbo ye IND. Ungave iwe unoda izvi? Ndokumbirawo mubate Law & More.
Wobva watibata parunhare +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar: